Diyaaraddii bur burtay ee ay saarnaayeen kooxda Chapecoense Shidaalba kuma harin markay dhacaysay! – Gool FM
(Bogota), 01 December 2016 –Maamulka dhinaca Hawada ee Colombia ayaa xaqiijiyay in Diyaaraddii ay saarnaayeen ciyaartoydii kooxda Chapecoense ee Avro RJ85 ee ku dul bur burtay bannaanka Magaallada Medellin gelinkii dambe ee Isniintii uusan ku harin wax Shidaal ah xilligii shilkaasi dhacayay iyadoo Dayuuraddaasi oo sidday 77 qofood ay ka bad baadeen 6 qofood oo qura.
“Kaddib markii aan baritaan ku sameynay qaybihii ka bur buray diyaaradda waxaan si cad u xaqiijinaynaa in diyaaraddu Shidaal la’aan ahayd” sidaa waxaa shir jaraa’id ka sheegay Madaxa Duulista Alfredo Bocanegra.
Freddy Bonilla oo isna ah sarkaal dhinaca duulista ah ayaa sheegay in sida xeerku dhigayo ay tahay in Diyaaraddu ay haysataa Shidaal keyd ah oo 30 daqiiqo ay ku sii socon karto haddii si kedis ah xaalad deg deg ah ula kulanto ama ay ku degi weyso garoonkii qorsheheedu ahaa.
Dhinaca kale warbixinno horu dhac ah ayaa tilmaamaya in shidaal la’aanta diyaaraddaasi heysay laga gartay wada hadalkii ugu dambeeyay ee dhex maray Duuliyihii diyaaradda iyo ninkii hagayay Tower-kii ugu dhowaa.
Illaa iyo haatan Colombia waxa ay xaqiijisay haybta meydadka 59′ Rakaabkii diyaaraddu la dhacday oo 52′ ka mid ah ay u dhasheen Brazil, 5′ Bolivian ah, 1 Uruguay u dhashay iyo 1 Venezuela ka soo jeeday.
Weli Baaritaannadu way socdaan, iyadoo warar ay BBC-du heshayna tilmaamayaan in Sanduuqyadii Madoobaa ee Diyaaradda oo ay ku keydsan yihiin dhammaan hadalladii Diyaaradda gudaheeda loo diri doono waddanka Ingiriiska, si halkaasi loogu sameeyo baaritaanno dhowr bilood qaadan doona.
RASMI: Harry Kane oo heshiis cusub qallinka ugu duugay Tottenham